ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်အားကြီး၍ ပြိုကွဲခြင်းဖြင့် အားနည်းကြသည်။ | Together We Are Strong! Alone We Are Weak!| Real Conversion
ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့် ဗွီဒီယိုဖိုင်များသည် လစဥ်လတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း တသန်းခွဲဖြင့် နိုင်ငံပေါင်း ၂၂၁ ကျော် www.sermonsfortheworld.com ဆီသို့သွား ရောက်လေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြပြီး ဤစာမျက်နှာကို လာကြသည်။ Youtube မှ ဒီစာမျက်နှာကို လူတို့အားလာစေသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လစဥ်လတိုင်း စကား ၄၆ မျိုးဖြင့် ကွန်ပြူတာ တသိန်းတသောင်းမျှသော လူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ ဤတရားဒေသနာသည် မူပိုင်မလုပ်ထား၍ တရားပို့ချသူများ ခွင့်ပြုချက်မလို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းသို့ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နေသော ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ငါတို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်ထည့်ဖို့ ဤနေရာကို ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။
ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်အားကြီး၍ ပြိုကွဲခြင်းဖြင့် အားနည်းကြသည်။
TOGETHER WE ARE STRONG! ALONE WE ARE WEAK!
လော့စ်အိန်ဂျယ်လ်ရှိ Baptist Tabernacle အသင်းတော်တွင် ၂၀၁၅ခုနှစ်
ဇွန်လ ( ၂၁ ) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
Dr. R. L. Hymers, Jr.၏ တရားဒေသနာဖြစ်သည်။
Lord’s Day Morning, June 21, 2015
“ထိုမှတပါး၊ မေတ္တာစိတ်ရှိစေခြင်းငှါ၄င်း၊ ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်စေခြင်းငှါ၄င်း၊ တိုက်တွန်းနှိုးဆောင်ရသောအခွင့်ကိုရှာ၍၊ အချင်း ချင်းတယောက်ကိုတယောက် ထောက်စာကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။ လူအချို့ တို့၏ထုံးစံရှိသည်အတိုင်း၊ အချင်းချင်းစည်းဝေးခြင်းအမှုကို မရှောင်မလွှဲ ကြနှင့်။ အချင်းချင်းတို့ကို တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြလော့။ ကာလအချိန် ရောက်လုနီးသည်ကိုထောက်သဖြင့်၊ သာ၍ကြိုးစားကြလော့။” (ဟေဗြဲ ၁၀း ၂၄- ၂၅ )
ဤတရားဒေသနာသည် ကျွနု်ပ်၏တရားဒေသနာများစွာလိုပါပဲ ယောင်ဝါးဝါးမလွန်ကူမှု တစ်ခုအဖြစ် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏လူငယ်လေးများကဲ့သို့ပင် အသစ်သောမိန်းကလေး နှစ်ဦးအကြောင်းကို ကြားခဲ့ရသည်။ "သူတို့သည် အရမ်းဖော်ရွေကြသည်" ဟုဆိုကြသည်။ သို့ သော် သူတို့သည် ငါ့ကို မနှစ်သက်ကြပေ။ ထိုအကြောင်းကို ကျွနု်ပ်စဉ်းစားမိတယ်။ ကျွနု်ပ်စိတ် ထဲတွင် ကန့်လန့်ကန့်လန့်ဖြစ်နေသည်။ ကျွနု်ပ်၏တရားဒေသနာများကို အနှောက်အယှက်ဖြစ် သည်တော့မဟုတ်ပါ။ သူတို့စိတ်ဝင်တစားရှိလာစေရန် ကျွနု်ပ်သည် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပါ သည်။ လူငယ်များသည် ၄င်းတို့၏နှုတ်ကို အနည်းငယ်ဖွင့်၍ ထိုင်လေ့ရှိကြပါသည်။ ကျွနု်ပ်တ ရားဟောနေစဉ်တွင် သူတို့မျက်လုံးများသည် ကျွနု်ပ်ကို စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်နေကြသည်။ ကျွနု်ပ်၏ တကိုယ်တည်းဖြစ်ကြသည်။ ကျွနု်ပ်သည် ထိုလူငယ်လေးများနှင့်အတူနေချင်သည်။ ကျွနု်ပ်သည် သူတို့နှင့်အတူနေနိူင်ကြောင်း ဆိုကြပါသည်။ ထိုမိန်းကလေးနှစ်ဦးအား စိတ်မ ကောင်းဖြစ်စေသောအရာမှာ တရားဒေသနာအဆုံးပိုင်းရောက်ခါနီးလေးတွင် ပြောလိုက်သော တစ်စုံတစ်ခုကြောင့်သာဖြစ်မည်ဟု ကျွနု်ပ်တွေးမိသည်။ ကျွနု်ပ်တိုတိုတုတ်တုတ်လေးဆုတောင် လိုက်သည်။ ထို့နောက် တီဗွီကင်မရာဆီသို့ လျှောက်လာသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ ယူကျုုတ်နှင့် ၀တ်ဆိုက်တွင် ပရိသတ်များကို စကားပြောသည်။ ကြည့်နေသောသူများအား "ဘာပဲလုပ်လုပ်၊ သမ္မာကျမ်းစာကို ဟောကြားသောအသင်းတော်သို့သွား၍ ပါ၀င် မိဿဟာရဖွဲပါ။ တံခါးသည် သင့်အတွက် အမြဲဖွင့်ထားပါသည်" ဟူသောအရာကို သူတို့အား ပြောသည်။ ကျွနု်ပ်သည် နောက်ဆုံးစကားလုံးကို Jerry Falwell ထံမှ ၄င်း၏တီဗွီအစီအစဉ်များတွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သကဲ့ သို့ ကောက်နှုတ်ထားပါသည်။ "ထိုနေရာမှာ အမြဲတမ်းတံခါးဖွင့်ထားလျက်ရှိပါသည်။" ထို့ နောက် ကျွနု်ပ်ပြောလေ့ပြောထရှိသောအရာမှာ "အသင်းတော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြေးလွှားမသွား ပါနှင့်" ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ကျွနု်ပ်၏တရားဒေသနာအဆုံးပိုင်းတွင် ထည့်သွင်းထား သည့် မိန်းကလေးနှစ်မနှစ်သက်သည့် စကားလုံးဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည် အသင်းတော်မှ ထွက်သွားကြလေတော့သည်။
ထိုသို့ပြောဆိုခြင်းကို ကျွနု်ပ်ရပ်တန့်ရမည်လော။ မဟုတ်ပါ။ ကျွနု်ပ်သည် ဆက်လက် ပြောဆိုမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ အကြောင်းမှာ ထိုအရာသည် လူငယ်များလုပ် ဆောင်ရန်လိုအပ်သောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသည် အကြောင်းတရားတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါ သည်။ ကျွနု်ပ်တို့အသင်းတော်သည် ဆယ်ကျော်သက်အဆုံးပိုင်းနှင့်နှစ်ဆယ်နှစ်အစောပိုင်း ကာလကာလအသက်အရွယ်ရှိ ပြောင်းလဲလာသူများကိုပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် ကြီးထွားလာတော့ မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာသည် ကြုံတောင့်ကြုံခဲသောအရာဖြစ်သည်။ အသင်းတော်အများစု သည် ၈၈%သော အသင်းတော်ရှိလူငယ်များကို ဆုံးရှုံးခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် ထိုအရာမှာ အခြားသောတရားဒေသနာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် အသင်းတော်များစွာက ဆုံးရှုံး ထားသည် ထိုအသက်အရွယ်ရှိခိုင်မာသောလူငယ်များကို ထပ်ပေါင်းခြင်းအားဖြင့် ကြီးထွားလာ ကြပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် လက်သီးနှင့်ထိုးပြီး မောင်းမထုတ်ပါ။ သို့မဟုတ် သူတို့ကို "ချိုသာ သောစကားဖြင့် ပြောဆိုကြပါမည်။"
ယနေ့ခေတ်ကလေးများသည် ထိုသို့သောချဉ်းကပ်မှုများ၏တုပဟန်ဆောင်မှုများတွင် ထူးချွန်ထက်မြစ်ကြပါသည်။ ကျွန်တော်က သူတို့ကို တည့်တည့်ပြောသည်။ ကျွန်တော်က သူတို့အား "ဤသည်မှာ သင်လိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်၊ ဤသည်မှာ ၄င်းအား သင်လိုအပ် သည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်" ဟုဆိုသည်။ ဟာသမဟုတ်ပါ။ ဖြောင့်ဖြောင့်မှန်မှန်သွန်သင် ခြင်းဖြစ်သည်။ အရယူပါ၊ သို့မဟုတ် ချန်ထားပါ။ သူတို့ချန်ထားခဲ့သည့်တိုင်၊ ကျွနု်ပ်သည် သူတို့ အပေါ်ရိုးသားဖြူစင်သည်ကို သိကြလိမ့်မည်။ သင့်ကို ကျွနု်ပ်ကဲ့သုိ့ဖြစ်လာရန် ကျွနု်ပ်ကြိုးစား နေသည်မဟုတ်။ သင့် ပြောင်းလဲလာရန်သာ ကြိုးစားအားထုတ်သည်။ ကျွနု်ပ်၏ပန်းတိုင်မှာ သင့်အား စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာပြီး ခိုင်မာသောအသင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်စေ ရန်ဖြစ်သည်။
"ဤအရမ်းဆိုးတဲ့အသင်းတော်ကို အဘယ့်ကြောင့်လိုအပ်ရမည်နည်း" ဟု သင်ကဆို ပေလိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အသင်းတော်မရှိလည်း သင်၌ တည်မြဲသောအရာမရှိ။ ထိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး Alvin Toffler က ၄င်း၏ အနာဂတ်စိတ်ချောက်ချားမှု စာအုပ်တွင် ရေးသားထားပါသည်။ သူက "ထာဝရသေခြင်း"၊ "ခဏသာသဘောတရား"၊ " အနာဂတ်တွင် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု"၊ "အပိုင်း လိုက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း"၊ နှင့် " သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကိုဆုံးရှုံးခြင်း" အကြောင်းများ ကို ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း။ ရွှေ့ပြောင်းနိူင်သောအ ရာနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းက တည်မြဲသောမိတ်ဆွေများကို မပေးနိူင်ပေ။ တည်မြဲသောအိမ်လည်း မပေးနိူင်ပေ။ တည်မြဲသောဆက်နွယ်မှုလည်း မပေးနိူင်ပေ။ ကျွနု်ပ်တို့သိရှိထားသောလူနှင့် အရာအားလုံးသည် ယာယီသာဖြစ်သည်။ ၄င်းက လူငယ်များအား အနာဂတ်ချောက်ချားမှုကို ပေးပါသည်။ Toffler က ဤစာအုပ်ကို ၁၉၇၀ တွင် ရေးသားထားပါသည်။ ထိုစာအုပ်ကို ကြာသပတေးနေ့က နောက်ဆုံးဖတ်ရှုသည့်အချိန်တွင် ၄င်းကိုလွန်ခဲ့သော ခြောက်လက ရေး သားသကဲ့သို့ထင်ရသည်။ လူတို့သည် နေ့ရာတိုင်းတို့ရွေ့ပြောင်းပြီး မကြာခဏပြောင်းလဲကြ သည်။ ထိုလူငယ်များသည် မတူညီသောဗီရိုတစ်ခုအောက်တွင်အသက်ရှင်သည့်၊မတူညီသော လမ်းတွင် ညတိုင်းနေထိုင်သောသူများကဲ့သို့ လာကြပါသည်။ ကလေးများစွာတို့သည် ဆေးဝါး လိုအပ်နေသည့်ပုံစံတွင်ရှိနေသည်မှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ လောကကြီးသည် သူတို့အား ပတ် ချာလည်ခိုင်းကြသည်။ သူတို့အသက်တာကို အသီးသီးနိူင်ဖို့ရန် ဆေးပြားများလိုအပ်သည်ဟု တွေးထင်မိသည်။ ၄င်းက ကျွနု်ပ်အား ကလေးများ၏ "မိတ်ဆွေများ" ဟူသောစကားများကို ပြောဆိုကြားစေလိုကြောင်း အလန့်တကြားဖြစ်စေသည်။ သူတို့က တစ်နာရီ သို့မဟုတ် နှစ်နာ ရီ အတွက် သာသိရှိကြပါသည်။ ထိုအမှားကို ကျွနု်ပ်မမြင်ပါ။ ကျွနု်ပ်လေ့လာနေခြင်းသာဖြစ်ပါ သည်။ ယနေ့ခေတ်ကလေးများက " မိတ်ဆွေများ" များကို ပြောင်းလဲပြီး ကျွနု်ပ်တို့၏အတွင်း ခံဘောင်းဘီကို ခဏခဏလှဲလှယ်အသုံးပြုသကဲ့သို့ လျှင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲကြဟန်တူပါသည်။
Paul McCartney သည် ကျွန်တော်ထက် တစ်နှစ်တိတိငယ်သည်။ သူသည် ဟစ်ပီ တစ်ယောက်ဖြစ်နိူင်ခြေရှိသည်။ Paul McCartney ကဲ့သို့ဟစ်ပီများစွာတို့သည် အထီးကျန်ဆန် လွန်းကြပါသည်။ သူက Mr. Griffith သီဆိုသည့် ထူးဆန်းသည့်တေးသီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ရေး သားခဲ့ပါသည်။ ထိုသီချင်းသည် ဂျွန်လင်နွန်နှင့်အတူသီဆိုသည့်အချိန်တွင် သူတို့အတွက် ကြီး မားသည့်ခလုတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၄င်းက လူနှစ်ဦးအကြောင်းကို ပြောနေသည်။ သူတို့မှာ Eleanor Rigby (လက်မထပ်ရသေးသည့် အလယ်အလတ်အသက်အရွယ်) ၊ နှင့် တစ်ဦးတည် နေသည့်ယဇ်ပရောဟိတ် Father McKenzie တို့ဖြစ်ကြသည်။
Father McKenzie က အဘယ်သူမျှနားမထောင်သည့်တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ကို ရေးသားသည်။
အဘယ်သူမျှမရှိသည့် ထိုညတွင် ၄င်း၏ခြေအိပ်များကိုအပေါက်ဖာလျက် အလုပ် လုပ်နေသည်ကိုကြည့်ပါ။
သူသည် အဘယ်အရာကို ဂရုစိုက်ပါသနည်း။
အဘယ်သူမျှ အာရုံစိုက်နားထောင်မှာမဟုတ်သော တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ကို ယဇ်ပုရောဟိတ် အိုကြီးက ပြင်ဆင်ရေးသားနေပါသည်။ "အဘယ်သူမျှမရှိသည့်အချိန်တွင်" ၄င်း၏ခြေအိပ် ပေါက်များကို ဖာထေးနေပါသည်။ "သူသည် အဘယ်အရာကို ဂရုစိုက်သနည်း။" သူ့ကိုအ အဘယ်သူမျှ ဒုက္ခပေးမည်မဟုတ်ဘဲ တစ်ဦးတည်းအထီးကျန်စွာနေလေ့ရှိပါသည်။
Eleanor Rigby သည် ဘုရားကျောင်းတွင် သေသဖြင့် သူ့မ၏နာမည်နှင့်အတူ ထိုနေရာတွင် သင်္ဂြိုလ်ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမလာခဲ့ပါ။
သူမသည် ၄င်း၏နာမည်နှင့်ဆက်စပ်မည့် ကလေးမကျန်ရစ်ခဲ့ပါ။ သူမ၏အသုဘသို့ အဘယ်သူ မျှမလာခဲ့ကြပါ။
Father McKenzie က သင်္ချိုင်းမှပြန်လျှောက်လာသည်ဖြစ်၍ ၄င်း၏လက်မှ အမှိုက် များကို စုသိမ်းနေသည်။
သူမ၏အသုဘအစီအစဉ်သို့ အဘယ်သူမျှမလာခဲ့ကြပါ။ သူ၏တရားဒေသနာကို အဘယ်သူမျှ မကြားပါ။ အဘယ်သူမျှ မပြောင်းလဲပါ။ ထို့နောက် သံစုံသီချင်းက ဤသို့ဖြစ်သည်။
ထိုသို့သောအတွေးများက ဟစ်ပီများကို စိုးရိမ်ပူပန်စေပါသည်။ သူတို့သည် ဆန်ဖရန် ဆစ္စကိုရဲ့ဟိုက်စ်အပ်ဆဘူရီးရှိ ဘာကေလေ၊ ဟောလီဝုဒ် ဘီးလ်၊ ဘီနိူက်ကမ်းခြေရှိထောင် ပေါင်းများစွာတို့နှင့်အတူ သွားခဲ့ကြပါသည်။ သူတို့၏အစည်းက အိမ်ဟောင်းလေးကို ရရှိကြပေ မည်။ သူတို့အားလုံးသည် ထိုနေရာတွင် နေထိုင်ကြပေမည်။ အခြားသောသူများသည် ထိုနေ ရာတွင် တစ်ည သို့မဟုတ် နှစ်ညလော "ထိုးအိပ်ကြ" ပါသည်။ သူတို့သည် အတူတကွရှိလိုကြ ပါသည်။ သူတို့သည် အများ၏ခံစားချက်ကို လိုလားကြပါသည်။ သူတို့သည် ဘုရားကျောင်းသို့ လာစေဖို့ အထူးသဖြင့် သူတို့ကို မူးယစ်သုံးစွဲစေပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ထိုင်စေလျှင် ပိုတောင် လွယ်ကူပါသည်။ သူတို့ကို "ယေရှု၏လူဝတ်ကြောင်များ" သို့မဟုတ် "ဘုရားသခင်၏လူများ" ဟုခေါ်ကြသည်။
နှစ်ခြင်းအသင်းတော်က တကယ်လွဲမှားသွားသည်။ သူတို့သည် ထိုသို့သောကလေး များသန်းပေါင်းများစွာကို ရရှိကြပါသည်။ သို့သော် သူတို့ကို ကြောက်လန့်နေကြသည်။ သူတို့ သည် ထာဝရအတွက် အလွန်ပင်နောက်ကျခဲ့ကြပါသည်။ ကာရေ့မက်တစ်နှင့်ပင်္တေကော်စ တယ်များက ၄င်းတို့ကို အရယူကြပါသည်။ ယနေ့တွင် နှစ်ခြင်းများသည် အရှေ့တိုင်းသားနှင့် လက်တင်အမေရိကနိူင်ငံရှိကလေးများကို ကြောက်ရွံ့နေကြပါသည်။ သူတို့သည် သန်းပေါင်း များစွာသောကလေးများကို အလွန်တကူအရယူကြပါသည်။ သို့သော် သူတို့သည်လည်း ကြောက်ရွံ့နေကြပါသည်။ သူတို့သည် ထိုအချက်တွင်လည်း ထာဝရအတွက် တဖန် နောက်ကျ ကျန်ခဲ့ကြပြန်ပါသည်။
သို့သော် သင်တို့ကလေးများသည် အတူတကွ "လဲအိပ်ရန်" အများပိုင်အိမ်မလိုအပ် ပေ။ ထိုသို့အများနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများအတွက် လိုအပ်သည်ဟု ခံစားရန်ပင်မလိုအပ်ပါ။ သိပ်မကြာသေးသည့်အချိန်တွင် "ယေရှု၏လူများ" နှင့်အတူ အလုပ်လုပ်နေသောသူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူ စကားပြောနေပါသည်။ ကျွနု်ပ်က သူ့အား ယနေ့လူငယ်များက ဟစ်ပီများလုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ အများနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာတစ်ခုအတွက် လိုအပ်ချက်ကို မခံစားခဲ့ကြပါသလား။ သူက "ထိုသို့သောအရာကို ကျွနု်ပ်မတွေးမိပါ။ ကျွနု်ပ်မသိပါ" ဟုဆို သည်။ အဖြေသည် ကျွနု်ပ်ထံသို့ရောက်လာသည်ဟု ဆိုလိုက်သည့်အချိန်တွင် "သူတို့သည် အများဆိုင်နေရာတစ်ခုကို အလိုမရှိကြပါ။ အကြောင်းမှာ သူတို့တွင် အိုင်ဖုန်းများနှင့်စမတ်ဖုန်း များကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါသည်။" သူတို့က ဟစ်ပီးဟောင်းများတွင်ရှိသကဲ့သို့ ဘုံရိပ်သာလည်း အလိုမရှိကြပါ။ သူတို့တွင် အိုင်ဖုန်းနှင့်စမတ်ဖုန်းများ လက်ဝယ်ရှိကြပါသည်။ သူတို့က ယင်းတို့ နှင့်ပါတ်သက်ပြီးစာရေးကြသလို သူတို့နှင့်ပါတ်သက်ပြီး စကားလည်းပြောကြပါသည်။ သူတို့ တွင် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများစွာရှိကြသည်ဟုလည်း ဟန်ဆောင်ပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ထိုစက် များက စစ်မှန်သောသူငယ်ချင်းများ၏နေရာကို အရယူကြပါသည်။ သူတို့တွင် အီလက်ထွင်နစ် မိတ်ဆွေများရရှိရန် အရမ်းလွန်ကူသည့်အချိန်တွင် စစ်မှန်သောသူငယ်ချင်း များလုပ်ဆောင် သောဒုက္ခအားလုံးကို အဘယ့်ကြောင့် ကျော်ဖြတ်လိုကြပါသနည်း။ သူတို့သည် အသေးစား အီလက်ထွင်နစ်အသေးစားပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်ခဲ့လျှင် Eleanor Rigby နှင့် Father McKenzie တို့သည် အထီးကျန်သည်ဟု ခံစားမိကြမည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့သည် သင်၌ရှိသကဲ့သို့ သူငယ် ချင်းများ "ပိုင်ဆိုင်ခါနီး" လေးပင်ဖြစ်ပေမည်။ သို့သော် သူငယ်ချင်းဖြစ်"ခါနီး" ဟူသည်မှာ စစ်မှန်သော သူငယ်ချင်းမဟုတ်ပါ။ နည်းလမ်းလည်း မရှိပါ။ တောင်ကယ်ရိုလိုင်နားပြည်နယ်ရှိ လူငယ်လေးတစ်ဦးအကြောင်းကို ကြားမိပါသလား။ သူသည် လွန်ခဲ့သောအပတ်က လူကိုးဦး ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ သူ၌ မှားယွင်းသောအရာရှိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်။ သူသည် အင်တ နက်ပေါ်တွင် နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။၄င်းက သူ၏ဦးနှောက်ကို ကယောက်ချောက်ချားဖြစ်စေသည်။ အချို့သောအချိန်များတွင် အနည်းဆုံး စက်များကို ဖြုတ်ထားပါ။ စက်များကိုဖြုတ်ပြီး မှန်ကန် သောဘဝဖြင့်အသက်ရှင်နေထိုင်ပါ။ ဘုရားကျောင်းတွင် အမြဲရှိနေပါ။ ထိုအချက်က ကျွနု်ပ်တို့ အသုံးပြုသော ကျမ်းပိုဒ်ဆီသို့ရောက်ရှိစေသည်။
“ ထိုမှတပါး၊ မေတ္တာစိတ်ရှိစေခြင်းငှါ၄င်း၊ ကောင်းသော အကျင့်ကို ကျင့်စေခြင်းငှါ၄င်း၊ တိုက်တွန်းနှိုးဆောင်ရ သောအခွင့်ကိုရှာ၍၊ အချင်း ချင်းတယောက်ကိုတယောက် ထောက်စာကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။ လူအချို့ တို့၏ထုံးစံရှိသည် အတိုင်း၊ အချင်းချင်းစည်းဝေးခြင်းအမှုကို မရှောင်မ လွှဲကြနှင့်။ အချင်းချင်းတို့ကို တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြလော့။ ကာလအ ချိန် ရောက်လုနီးသည်ကိုထောက်သဖြင့်၊ သာ၍ကြိုးစားကြလော့။” (ဟေဗြဲ ၁၀း ၂၄- ၂၅ )
ထိုကျမ်းပိုဒ်နှင့်ပါတ်သက်ပြီး ရှင်းပြချက်စာအုပ် ဆယ်အုပ်ထက်မနည်း ကျွနု်ပ်ဖတ်ရှုခဲ့ ပါသည်။ ထိုရှင်းပြချက်စာအုပ်အားလုံးက ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ဒေသန္ဒာရအသင်းတော်တွင် မိဿဟာရဖွဲရန် လိုအပ်သည့်အကြောင်းကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ Dr. W. A. Criswell က "ဤကျမ်းပိုဒ်သည် [အသင်းတော်] အပေါ်သစ္စာရှိရန် ဒေသန္ဒာရအသင်းတော်၏ အရေးကြီးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကျမ်းစာရှိခိုင်မာသောအတည်ပြုချက်များကိုထဲမှ တစ်ခုကို ပေးအပ်ပါသည်" ဟုဆိုသည်။ (The Criswell Study Bible, Thomas Nelson Publishers, ၁၉၇၉၊ စာ- ၁၄၃၈၊ ဟေဗြဲ ၁၀း ၂၅ မှတ်စု)
ခေတ်သစ်ဘာသာပြန်ဆိုထားချက်ကို သင့်အားချပြပါရစေ။ ကျွနု်ပ်က ကေဂျေဗီကျမ်း ထဲက ဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အခြားဘာသာပြန်ဆိုချက်ကို ကျွနု်ပ်က သိပ်နှစ်သက်သည် တော့မဟုတ်။ သို့သော် တခါတရံ ကျမ်းပိုဒ်၏ သက်ရောက်မှုကို "ခံစား" ရန် ခေတ်သစ်ဘာ သာပြန်ဆိုထားချက်များဖတ်ရသည်လည်း အကူအညီဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် NIV နှင့် NASV ဘာသာပြန်ဆိုချက်များကို အတူတကွချထားသည်။
ထိုမှတပါး၊ မေတ္တာစိတ်ရှိစေခြင်းငှါ၄င်း၊ ကောင်းသော အကျင့်ကို ကျင့်စေခြင်းငှါ၄င်း၊ တိုက်တွန်းနှိုးဆောင်ရ သောအခွင့်ကိုရှာ၍၊ အချင်း ချင်းတယောက်ကိုတယောက် ထောက်စာကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။ လူအချို့ တို့၏ထုံးစံရှိသည် အတိုင်း၊ အချင်းချင်းစည်းဝေးခြင်းအမှုကို မရှောင်မ လွှဲကြနှင့်။ အချင်းချင်းတို့ကို တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြလော့။ ကာလအ ချိန် ရောက်လုနီးသည်ကိုထောက်သဖြင့်၊ သာ၍ကြိုးစားကြလော့။ (ဟေဗြဲ ၁၀း ၂၄ NASV; ၁၀း၂၅ NIV )
ကျွနု်ပ်တို့သည် မေတ္တာထားလျက် ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်လာနိူင်ပြီး "တက်ကြွ လာရန်" အသင်းတော်တွင် ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ "တစ်ဦးကိုတစ်ဦးခွန်အားပေးရန်" အသင်း တော်တွင် ရှိနေရန်လိုအပ်ပါသည်။ "ကာလအချိန်ရောက်လုနီးသည်ဖြစ်၍" အသင်းတော်တွင် ရှိနေရန်မှာ အရေးကြီးကြောင်းပြသသည့် John MacArthur က "နောက်ဆုံးသောကာလအ အရေးပေါ်" ဟုခေါ်သည့် အရာတစ်ခုရှိသည်။ ထို "နေ့ရက်" က ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းကိုရည် ညွှန်းသည်။ အရမ်းအရေးကြီးသည့် ပရောဖက်ပြုချက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဤ လောက၏နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလဆီသို့ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်၍၊ အသင်းတော်များတွင် မိမိကိုယ်ကိုဆက်ကပ်အပ်နှံရန်မှာ အလွန်ပင်အရေးကြီးလာပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ အကြောင်းမှာ ကျွနု်ပ်တို့အသက်ရှင်နေသည့် နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလတွင် ယုံကြည်ခြင်း ကိုပျောက်ဆုံးစေရန် သာ၍ကြီးမားသည့် လူမှုရေးဖိအားများလည်းရှိနိူင်ပါသည်။ အတိတ်က အချိန်ကာလတွင် လူတို့သည် တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ဝတ်ပြုတက်ရောက်ခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်နိူင် သည်။ သို့သော် ယခုတွင်မူ လူမှုရေးအပြောင်းအလဲလေညင်းလေးသည် ဒေသန္တာရအသင်း တော်တွင် အခြားသောယုံကြည်သူများနှင့်မိဿဟာရဖွဲခြင်းတွင်ရှိနေရန် သာ၍အရေးကြီးလာ စေပါသည်။ သောမတ်စ်ဟဲလ်က ၄င်း၏အနက်ဖွင့်ကျမ်းတွင် ပြောဆိုသောအရာကို နားထောင် ကြည့်ပါ။ "လူတစ်ဦးသည် [၄င်း၏ယုံကြည်ခြင်းတွင်] ရေလိုက်ငါးလိုက်ဖြစ်လာလျှင် သူ့ကိုအ လျှင်အမြန်ခွန်အားပေးပြီး အားပြည့်စေရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး မေတ္တာနှင့်ကောင်း သောအပြုအမူဆီသို့ ဦးတည်လျှောက်လှမ်းကြပါစို့။ သင်တို့တွင် အဘယ်သူမျှ [အပြစ်နှင့် လောကစည်းစိမ်းထဲသို့] လဲကျခြင်းမရှိစေရန် ကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။ ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်အားကြီး ၍ ပြိုကွဲလျှင် အားနည်းကြသည်။" (သောမတ်စ်ဟဲလ်၊ အသုံးချဓမ္မသစ်အနက်ဖွင့်ကျမ်း၊ Kingsway Publications, ၁၉၉၇၊ စာ- ၉၁၃-၉၁၄၊ ဟေဗြဲ ၁၀း ၂၄ မှတ်ချက်၊ Hymers ၏ မှတ်စု)
ဒေသန္တာရအသင်းတော်သည် အရေးကြီးသော်လည်း သမ္မာကျမ်းစာကိုလေ့လာရန်အ တွက် သင်ရောက်ရှိလာရာ နေရာသက်သက်တော့မဟုတ်ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့၏မိဿဟာရဖွဲ့ခြင်း သည် အစီအစဉ်ပြီးနောက်သုံးဆောင်သောအစားအသောက်တွင် တည်နေသည်မဟုတ်။ သို့ရာတွင် ၄င်းသည် အရေးပါလှသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိဿဟာရမှာ အသင်းတော်၏အဓိကရည် ရွယ်ချက်တည်းဟူသော ခရစ်ယာန်မဟုတ်သေးသောသူများကို ဆောင်ယူတည်ဆောက်စေ ခြင်းတွင်တည်ဆောက်ထားပါသည်။ သောမတ်စ်ဟဲလ်၏ အနက်ဖွင့်ကျမ်းက "ဧဝံဂေလိလုပ် ငန်းသည် အသင်းတော်၏ပထမရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်၊ ယောကျ်ားနှင့်မိန်းမများအား ယေရှု ခရစ်ထံသို့လည်းကောင်း၊ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်လည်းကောင်း ဦးဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပထမ အရေးကြီးသောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်" ဟုဆိုသည်။ ( ထပ်၍၊ စာ-၁၂၅ )
ထို့ကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် လူသစ်များအား၊ "ကျွနု်ပ်တို့နှင့်လာပါ၊ အတူတကွစားကြပါ၊ ကျွနု်ပ်တို့နှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါ၊ ကျွနု်ပ်တို့နှင့်ဝတ်ပြုပါ၊ ကျွနု်ပ်တို့နှင့်အတူ ဧဝံဂေလိလုပ်ပါ၊ ဘုရား ကျောင်းသို့လည်း လာကြပါ၊ ညနေအစီအစဉ်သို့လည်းလာကြပါ၊ ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်သို့ လည်းလာကြပါ၊ ဘုရားသခင်၏မိသားစုဝင်အဖြစ်လာကြပါ" ဟုခေါ်ဖိတ်သည်။ "ပေါင်းစည်း လျှင် အားကြီးပြီး ပြိုကွဲလျှင် အားနည်းသည်။"
လူတိုင်းသည် ထိုမှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြမည်မဟုတ်။ သူကို စောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ကိုလည်း ရှင်းပြရမည်ဖြစ် သည်။ သူ့ကိုကူညီရန် ကျွနု်ပ်တို့လုပ်ဆောင်နိူင်သမျှကို လုပ်ဆောင်ပါမည်။ ထိုအရာမှာ ကနဦး အသင်းတော်များလုပ်ဆောင်သောအရာလည်းဖြစ်ပါသည်။ Dr. Michael Green က ကနဦးအသင်းတော်ရှိဧဝံဂေလိလုပ်ငန်း ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် အံ့ဘွယ်စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ရေး သားခဲ့ပါသည်။ (Eerdmans Publishing Company, ၂၀၀၃ ) Dr. Green က "…မိဿဟာရ ဟူသည်မှာ အသင်းတော်ကြီးထွားတိုးတက်ဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်ပါသည်။ လူသည် သာ၍ကြွယ်ဝပြီးဆုလဒ်နှင့်ပြည့်စုံသောအခြားမိဿဟာရအားဖြင့် [အသင်းတော်ထဲ သို့]ဆွဲဆောင်နိူင်ရမည်။ ….သူတို့က ခရစ်ယာန်များ မည်သို့ချစ်ကြကြောင်းကို တွေ့ကြလိမ့် မည်။" (စာ- ၂၅၆ ) "လူသားမျိုးနွယ်အဆီးအတား၊ လိင်မှုရေးရာ၊ အတန်းအစား၊ ပညာရေး တို့သည်မှားယွင်းသောဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့ကိုကျော်လွန်ခြင်းသည် အသင်းတော်ကပေး သောမိဿဟာရဖွဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။" Dr. Green ၏ အဆိုအရ၊ ၀ှက်ထားလျက်ရှိသောအရာ မရှိဟု ဆိုသတည်း။ မယုံကြည်သူများသည် မှန်ကန်သောနေရာသို့ရောက်ရှိလျက် အခြားသူ များကို ဆက်ဆံသကဲ့သို့ ဆက်ဆံရသည်။ ကနဦးခရစ်ယာန်စာရေးဆရာ Tertullian (၁၆၀- ၂၂၀ အေဒီ) က အသင်းတော်တွင်ရှိသော ခရစ်ယာန်များ၏မေတ္တာနှင့်မိဿဟာရအကြောင်း ကို ပြောဆိုခဲ့သည်။ သူက ဤသည်မှာ ဘုရားမသိသေးသောလူများစွာတို့အား ကျွနု်ပ်တို့၏ယုံ ကြည်ခြင်းအစပိုင်းတွင် ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာရန်ဆွဲဆောင်မှုတွင် ကြီးမားသည့် အချက်ဖြစ်သည်။ (ထပ်၍) Tertullian က သန်းပေါင်းများစွာသောမယုံကြည်သူများသည် ယုံကြည်သူတို့အသက် တာတွင်ရှိသောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်မိဿဟာရဖွဲ့ခြင်းကို တွေ့ရှိကြသောကြောင့် တောင်အဖရိ ကရှိအသင်းတော်များနှင့်ပေါင်းစည်းလာခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။
ကျွနု်ပ်သည် အထီးကျန်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်မိဘများသည် ကွဲခွါကြသည်။ ကျွနု်ပ်အိမ်တွင် လုံးဝမနေစေချင်သည့် ဆွေမျိုးများအိမ်တွင်နေခဲ့ရသည်။ လမ်း တွေကို တစ်ယောက်တည်းလျှောက်ခဲ့ရသည်။ ကျွနု်ပ်သည် ဂျွန်လင်နွန်သီဆိုထားခဲ့သည့် သီချင်ကဲ့သို့အထီးကျန်လှသည်။
သူတို့သည် အဘယ်အရပ်က ပိုင်ဆိုင်သည်ကို ကျွနု်ပ်ပြောပြမည်။ သူတို့က ဤတစ်ခုလိုပင် အသင်းတော်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ၄င်းမှာ သင်ကုိယ်တိုင်လည်း ပိုင်ဆိုင်သောနေရာဖြစ် သည်။ ဆင်းရဲသား ဂျွန်လင်နွန်မှာ ယေရှုခရစ်ကို ဘယ်တော့မှအားမကိုးသကဲ့သို့ ဒေသန္ဒာရအ သင်းတော်ကိုလည်း ဘယ်တုန်းကမှ ရောက်မလာဘူးလေ။ နောက်ဆုံးတွင် သူသည် မူးယစ် ဆေးဝါးသုံးစွဲပြီး အချိန်ပေါင်းများစွာကို အိပ်ယာထဲတွင်သာ နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။
ကျွနု်ပ်သည် ခိုင်မာသောအသင်းတော်ထဲသို့မရောက်လျှင်၊ ဤနံနက်တွင် ဤနေရာ၌ ကျွနု်ပ်ရှိနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွနု်ပ်သည် ဆင်းရဲချို့တဲ့သောဂျွန်လင်နွန်ကဲ့သို့ပင် သေပြီးသားဖြစ် နိူင်ပါသည်ဟု ကျွနု်ပ်ပြောရဲပါသည်။ ကျွနု်ပ်သူငယ်ချင်းက မိမိကို်ယ်ကို သတ်သေသည်။ ကျွနု်ပ် လည်း ထိုသို့လုပ်နိူင်ပါသည်။ မသိနိူင်ဘူးလေ။ သို့သော် ကျွနု်ပ်သည် ဒေသန္ဒာရအသင်းတော် တွင်တွေ့ရှိရသော နွေးထွေးမှုနှင့်မိဿဟာရအားဖြင့် အမှောင်နှင့်အထီးကျန်ကမ္ဘာထဲမှ ကယ် တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြောင်းကိုသိရပါသည်။ ကျွနု်ပ်သည် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရှိ လာသည့်အချိန်တွင် ဘုရားကျောင်းသည် ကျွနု်ပ်၏ဒုတိယအိမ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
သင်တို့တွင် အများတို့သည် ငါ၏စကားကို နားထောင်ကြမည်မဟုတ်သည်ကို သိပါ၏။ ကျွနု်ပ်တို့နှင့်အတူ အထဲသို့ဝင်စားမည်လည်းမဟုတ်သည်ကို သိသည်။ သို့သော် သင့်ကို အထဲ သို့ခေါ်ဖိတ်သည်ကို အမြဲသတိရအောက်မေ့ပါ။ သင့်အား ကျွနု်ပ်တို့နှင့်အတူရှိစေလိုသည်ကို လည်း သတိရပါ။ ထိုအရာအတွက် တစ်ခုခုကိုပေးဆပ်ရမည်။ သို့သော် ဆက်ကပ်ခြင်းသည် အမြဲတမ်း တစ်စုံတစ်ခုကို ပေးဆပ်သည်ကို သိရပေမည်။ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းမရှိဘဲ ခိုင်မြဲ သော လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကို ကျင်းပနိူင်မည်မဟုတ်။ ကျွနု်ပ်သည် သင့်ထံသို့ အပ်နှံလိုသည်။ ထိုနည်းတူ သင်သည်လည်း ငါ့ထံသို့အပ်နှံသည်ကို အလိုရှိသည်။ သောမတ်စ်ဟဲလ်က ၄င်း၏ အနက်ဖွင့်ကျမ်းတွင် ရေးသားသကဲ့သို့ "ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်အားကြီး၍ ပြိုကွဲခြင်းဖြင့် အားနည်း လာသည်" ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ( ထပ်၍၊ စာ- ၉၁၄ ) တစ်ယောက်ယောက်က "ကျွနု်ပ်မလုပ် ဆောင်နိူင်ပါ" ဟုဆိုနိူင်သည်။ သင်တို့ကိုယ်တိုင် ရိုးသားဖြူစင်ပါ။ သင်လုပ်ဆောင်နိူင်ပါသည်။ သို့သော် သင်အလုိမရှိ။ သင်က "လွတ်လွတ်လပ်လပ်" နေချင်သည်။ အရမ်းဆိုးတာပဲ။ ဆိုလို သည်မှာ သင်က တစ်ဦးတည်းနေချင်သည်။ ပေါင်းစည်းလျှင်အားကြီး၍၊ ပြိုကွဲလျှင် အားနည်း တတ်ကြပါသည်။
ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့် အားကြီး၍ ပြိုကွဲခြင်းဖြင့် အားနည်းသည်။ ဤသည်မှာ ယနေ့နံ နက် ကျွနု်ပ်၏တရားဒေသနာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် သင့်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါ သည်။ သူ့ထံသို့လာပါ။ တရားစီရင်ခြင်းအမှုမှ သင့်အားကယ်ချွတ်ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ အသစ်သောအသက်တာကိုပေးရန် သေခြင်းမှ ထမြောက်တော်မူခဲ့ပါ သည်။ သူသည် ယခုအသက်ရှင်သည်။ တတိယကောင်းကင်၊ ပရဒိသုဘုံတွင် အသက်ရှင်ပါ သည်။ သင်သည် ပျောက်သောသား၏အစ်ကိုကြီးကဲ့သို့ အိမ်၏အပြင်ဘက်တွင် ရပ်နေတော်မ မူပါနှင့်။ သမ္မာကျမ်းစာက "အထဲသို့ဝင်မည်မဟုတ်" ဟုဆိုပါသည်။ ( လုကာ ၁၅း ၂၈ ) အခြား သောသူများသည် အိမ်ထဲတွင် ကြီးမားသည့်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပကြသည်။ သို့သော် အစ်ကိုကြီး က ကျွနု်ပ် "အထဲမဝင်ပါ" ဟုဆိုသည်။ သင်တို့တွင် အချို့တို့သည် ထိုသို့သောသဘောကို လုပ် ဆောင်နေကြသည်။ ကျွနု်ပ်တို့က "ခရစ်တော်အထဲသို့ဝင်ပါ၊ အထဲဝင်ပြီး ကျွနု်ပ်တို့နှင့်အတူ ပျော်ကြပါးကြပါ" ဟုဆိုကြသည်။ သို့သော် သင်တို့က "အထဲမဝင်ပါ" ဟုဆိုကြသည်။ ငါတို့ သည် သင်တို့ကို စောင့်နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်အထဲသို့ဝင်လာပြီး ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွင် ပူး ပေါင်းကြပါ။
ယေရှုက လိုလိုလားလား၊ နူးညံ့စွာခေါ်ဖိတ်လျက်နေ။
("နူးညံ့စွာယေရှုခေါ်ဖိတ်နေ"၊ Will L. Thompson ၁၈၄၇-၁၉၀၉ ရေးစပ်သည်။ )
ခမည်းတော်ဘုရား၊ အကြင်တစ်ဦးဦးသည် ယေရှုထံသို့လည်းကောင်း၊ ကျွနု်ပ်တို့အ တော်မိသားစုထဲသို့လည်းကောင်း အမှန်တကယ်ရောက်ရှိလာပါမည်အကြောင်း နာမတော်၌ ဆုတောင်းပါ၏။ "ကျွန်ုပ်တို့သည် ပေါင်းစည်းလျှင် အားအင်ရှိပြီး၊ အထီးကျန်လျှင် အားနည်း တတ်ကြပါသည်။" ဒီနံနက် ကျွနု်ပ်ပြောသမျှကို သင်မေ့လျော့နေလျှင် ထိုအချက်ကိုတော့ သတိရပါ။ ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်အားကြီး၍ ပြိုကွဲခြင်းဖြင့် အားနည်းသည်။ အာမင်..။
ဤတရားဒေသနာကိုခွန်အားရလျှင် Dr. Hymers ထံသို့ အီးမေးလ်တစ် စောင်ပို့ပြီး ပြောပြပါ။ rlhymersjr@sbcglobal.net (ဤနေရာတွင် နှိပ် ပါ) မည်သည့်ဘာသာစကားနှင့်မဆို Dr. Hymers ကို စာရေးသားပေး ပို့နိူင်ပါသည်။ သို့သော် ရေးတတ်လျှင် အင်္ဂလိပ်ဖြင့်ရေးလျှင် အကောင်း ဆုံးဖြစ်ပေမည်။
သငျသညျ Dr. Hymers ၏တရားဒသေနာကို အငျတာနကျပေါျတှငျ
www.realconversion.com သို့မဟုတျ www.rlhsermons.com. ဖွငျ့ အပတျစဉျတိုငျး ကွညျ့ရှုနိူငျပါသညျ။ “တရားဒသေနာစာမူ” ကိုနှိပျပါ။
သငျသညျ Dr. Hymers အား အီးမေးလျ rlhymersjr@sbcglobal.net ဖွငျ့လညျး ဆကျသှယျနိူငျပါသညျ။ သို့မဟုတျ စာအားဖွငျ့လညျး ဆကျသှယျနိူငျပါသညျ။
P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. ဖုနျး (၈၁၈)၃၅၂-၀၄၅၂
ဤတရားဒေသနာစာမူများကို ကူးယူ၍မရပါ။ သင်သည် Dr. Hymers ၏ခွင့်ပြုချက်မလိုဘဲအသုံးပြုနိူင်သည်။ သို့သော်
Dr. Hymers ၏ ဗွီဒီယိုတရားဟောချက်များကိုမူ ခွင်ပြုချက်ဖြင့်သာအသုံးပြုနိူင်သည်။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို Dr. Kreighton L. Chan က ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဟေဗြဲ ၁၀း ၁၉- ၂၅ တရားဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith က ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။
"ခရီရိုရိုက်ဘိုင်"၊ Paul McCartney (၁၉၄၂) ရေးစပ်သည်။